ONLF oo Xabad joojin Ku dhawaaqday Maanta Dowlada Itoobiya ay Soo Dhaweysay |
ONLF oo Xabad joojin Ku dhawaaqday Maanta Dowlada Itoobiya ay Soo Dhaweysay
Nairobi (estvlive) 12/08/2018
Jabhadda ONLF ayaa magaalada Nairobi maanta kaga dhawaaqday xabbad-joojin hal dhinac ah, ka dib muddo tobanaan sano ah oo ay dagaal kaga soo hor jeedday dawladda Itoobiya.
Qoraal ay soo saareen ayey ku sheegeen in xabbad joojinta oo dhaqan galaysa 12ka duhurnimo ee 12ka Agoosto ay salka ku hayso “baaqa nabadeed ee hogaamiyaha Itoobiya Abiy Axmed, iyo talaabooyinka ay xukuumaddu qaadday ee ay aasaaska ugu dhigayso wadahadallo nabadeed”.
“Waxaan u aragnaa in xabbad joojintu ay dadkeenna maslaxad u tahay”, sidaa waxaa yiri C/qaadir Xasan Hirmooge (Caddaani), afhayeenka ONLF, oo BBC u warramayey isagoo jooga Nairobi.
“Waxaan diyaar u nahay in maadaama dadkayagu ay muddo dheer dulmi tirsanayaan, in miis dushii lagu xalliyo dhibaatooyinka aan tirsanayno oo aaya ka talin ka mid tahay oo nabad gelyo ka mid tahay, oo xuquuqo badan oo kale ka mid yihiin” ayuu sii raaciyey Caddaani.
Wuxuu sheegay in arrinta xabbad joojinta halka dhinac ah ay isla soo qaadeen dawladda Itoobiya.
Ururka ONLF ayaa waaydii ugu danbeeyay ku howlanaa sidii mar uun loo soo afjari lahaa colaada mudada dheer soo taagneyd ee kala dhaxeeyay dowladda Itoobiya, kol hore-na waxaa xusid mudan in dowladda Itoobiya liiska argagixisada ka saartay Ururka iyo ururo kale oo ka dagalama dalka Itoobiya.